AdSense: Maitiro Ekubvisa Nharaunda kubva kuAuto Ads | Martech Zone
AdSense: Maitiro Ekubvisa Nharaunda kubva kuAuto Ads
Hapana mubvunzo kuti chero munhu anoshanyira saiti yangu haazive kuti ndinoita mari saiti neGoogle Adsense Ndinoyeuka kekutanga nguva pandakanzwa Adsense ichitsanangurwa, munhu akati ndizvo Webmaster Welfare. Ini ndinowanzo bvumirana, haina kana kubhadhara yangu yekutambira mitengo. Nekudaro, ini ndinotenda kudzikisa mutengo wesaiti yangu uye Adsense yakanangwa nenzira yavo neyakafanira kushambadza.
Izvo zvakati, chinguva chidiki ndakachinja marongero angu eAdsense nekubvisa matunhu ese aripo pane yangu saiti uye, pachinzvimbo ichi, ndichigonesa Adsense kuti igadzirise kwayakaisa kushambadza.
Ini ndakarega Adsense ichikwenya kushambadzira kwekuisa kwemwedzi mishoma uye ndikaona shoma mumari yangu yemwedzi. Nekudaro, iyo hombe banner inoiswa neGoogle nechepamusoro yangu inotungamira gallery yezvinyorwa inosemesa zvachose:
Kupesana nezvaungafunge, Auto Ads inokutendera iwe kudzora matunhu uye huwandu hweshambadziro dzinoiswa neGoogle pane yako saiti. Kana iwe ukapinda kuGoogle Adsense, sarudza Ads> Ongororo:
Panhare yekurudyi, pane bhatani rekugadzirisa pane rako bhuku. Paunodzvanya bhatani iro, iro peji rinovhura neese ari maviri desktop uye nharembozha yesaiti yako kwaunogona kuona uko Google iri kuisa ma ads. Uye, kupfuura zvese, unogona kunyatso bvisa dunhu rose. Ndakaita izvi neabnoxious header banner iyo yaitora yangu saiti yese.
Nepo iyo bhana inogona kutyaira yakawanda kubhadharisa mari, zvinotyisa kune yangu mushandisi ruzivo uye zvinondiita kuti ndiratidzike senge ndiri kungo spammer kuyedza kuita bhuru. Ndakabvisa dunhu.
Ini zvakare ndakadzora yakashomeka huwandu hweshambadziro pane peji kuenda ku4 Unogona kuwana izvo mune yeAdhi Mutoro chikamu kurudyi nerutivi. 4 ndicho chidiki chavanokutendera kuti usarudze.
Pane zvimwe sarudzo iwe yaunogona kugonesa uye kudzima pane yako saiti, kusanganisira mune-peji kushambadzira, zvakaenzana zvemukati, anchor kushambadzira, uye vignette kushambadza izere skrini skrini inowoneka pakati peji mizhinji.
Semuparidzi ari kupa tani yekutsvagisa kwemahara uye ruzivo, ndinovimba hauna hanya kuti ini ndinoita mari saiti yangu. Panguva imwe chete zvakadaro, ini handidi kutsamwisa vanhu uye kuvamisa kudzoka!
Tags: auto adsgoogle adsensesei kutikuita mari kushambadzirakubhadhara pakukandabvisa nzvimbo
Dzosera Zvemagariro: Dzosera Zvekare Zvemukati Zvemagariro Midhiya